''Haasaan Ministira Mummichaa kan abdii nutti horeedha'' - BBC News Afaan Oromoo
Ministira Mummee Itoophiyaa Dr Abiyi Ahimad
Erga kalleessa manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa Itoophiyaa Dr. Abiyi Ahimadiin Muummicha Minisitiraa taasisuun muudee booda haasawaa taasisaniiru. Haasaa isaanii kanaanis waa hedduun eegamaa kan ture yoo ta'u, BBCn yaada namoota garagaraa dubbiseera.
Riipportarri keenya akka taajabeettis jiraattoonni magaalaa Finfinneetti ispoortiin alatti haala kana dura hinbaramnee bakka gara garaatti walitti qabamuun sirna aangoo wal harkaa fuchuu hordofaa turan.
Haaluma kanaanis haasawaan Dr Abiyi waa'ee dhiifamaa, tokkummaa, haqaafi olaantumaa seeraafi kanneen kan fakkaata irratti xiyyeefachuun taasisan, miira jijjiramaafi abdii ofi keessa akka qabuu dubbataniiru baay'een. Haasawaan Ministiraa kan abdii nutti horeedhas jedhaniiru.
Keessattu jechi haasawa Ministirri Mummichaa Dr Abiyi, maatii namoota miidhamanii, kanneen miidhaan qaamaa irra gaheefi leeliftoota mirga namoomaa dhiifama gaafatanii namoota hedduu kan gurra bu'u ta'eera. Namootaa BBC godinaalee garaa garaa irraa dubbisees, dhimmi dhiifamaa dhimma waqtaawaa ta'usaa dubbataniiru.
'Ani mataan koo yeroo baayyeen hidhama ture' kan jedhan jiraataan magaala finffinnee tokko, namoonni jireenyi isaanii dadhabsiisee namatti galan, kan jireenya isaanii dorgommii keessa bahan jiru. Kan qee'eensaanii badee ilmoosaanii namni guddisaa jiru jiru. Isaani kanneen dhiifama gaafachu qofa osoo hintaanee akka kiisiin kennamuuf qabaata jedhaniiru.
Kana malees, dagatamanii hanga ammaatti namoonni boolla keessatti hidhamanii jiran jiru. Isaan kana namni hirranfateera. Kanaaf, hojiin angafaa moootummaa isaan kun namootatti makamanii nagana jiraachuu akka dand'an tolchuu akka ta'es namoonni ni dubbatu.
Jiraattuun magaalaa Jimmaa shamarree Ribqaa Caannee xiyyeeffannaa Dr. Abiyyi dhimmi dubartootaaf taasisan aanga'oota biroorraa adda isaan taaasisa jetti. Kutaa hawwaasa gara garaafi dhimmoota hawwaasa, dinagdeefi siyaasaa barbaachisu kaasaniiru. Keessattiyyuu ammo dhimma dubartootaa xiyyeeffannaa addaan dubbatan jetti Ribqaan.
Haasawaa isaanii kana keessatti haala kana dura hin baratamneen oolmaa haadhaafi haadha-warraa isaanii kaasuunis, ga'ee dubartootaa maatii, hawwaasafi biyya ijaaruu keessatti qaban ol kaasanii akka mullisan. Kun ammo isaan akka gammachiisu dubbataniiru. Dhimma kana ilaalchisee, Aadde Beeleliyeem Nagaash, "waa'ee dubartootaa xiyyeeffannaa addaan dubbachuun isaanii anaaf adda ta'ee natti mullata. Sirriitti kan dubartootaa irratti fuulleffateefi waanta nuti kanaan dura hin barredha. Waa'ee fayyadamummaafi mirga dubartootaa kan hojjenne caalaa kan hin hojjetiinitu caala jedhan," jetti.
Kitaabolee dhimmoota amantaa barreessuufi hiikuun kan beekaman Obbo Phaawulosisi gamasaaniitiin, haasawaa Muummicha Ministiraa kana sirnuma aangoo waljirjjiiruurraa ka'ee bareedaadha jedhan. Kanaan dura namni duraan biyya bulchaa ture yookaan du'ee ykn biyyaa ari'amee malee nagana aangoo waliif dabarsuun hin baramne jedhu.
Paartii tokko keessatti ta'ullee akkasitti wal hammatanii walitti dabarsuu aangoo seenaa Itoophiyaa keessatti arginee hin beeknu, jedhan. "Haasawaan dhageenyes haala Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu yaaddessaa kana keessatti kan abdii namatti horuu, kan foolii gaarii anama nama jedhu qabudha.
Akka kanaan dura barame wandaboo kaadireetiin maramee jechoota hiika hin qabneen kan dubbataman miti. Akka ka'umsaatti baayyee natti toleera. Yaaddoo keessa jirrurraa gara gaara abdiitti ol nubaaseera," jedhu Obbo Phaawuloos.
Jiraataan magaalaa Finfinnee waamicha Muumuchi Ministiraa lammileen ala biyyoota gara garaa keessa jiraataniif taasisan akka itti tole BBC'tti himan. Namoonni ala jiran yaadaafi ilaalcha gara garaa qabaatan hunduu biyyasaaniif akka barbaachisan haasawaa Muumcha Ministiraa keeessatti ka'uun isaan akka isaan gammachiise dubbatu jiraataan magaalaa Finfinnee kun.
Jiraattonni kun, ' kan dubbatan hafuurra kan dhalchan du'uu wayya' akkuma jedhan hunda caalaa jiraattonni dubbatan kun kan haasa'ame kun hojiin arguun akka caalaa isaan gammachiisu dubbatu.
Saayintistoonni teleskooppii haaraa fayyadamuun 'kaartaa hawaa haaraa' qopheessan